सर्वोच्चको फैसला : कार्यकर्ताको हर्क बढ्याई, तेह्र दिने सुध्धायी – Interview Nepal
सदर र वदरमा मलाई केही रुचि छैन। नागरिकको हैसियतले सत्य लेख्नु गलत हो भने गलत नै सहि । सामाजिक सञ्जालमा केही झोले, कार्यकर्ता र हनुमानेहरुले संसद पुन:र्स्थापनालाई जनताको जित भएको ठानेका रहेछन्। गोबर भरिएको दिमागले यसो भन्नू त ठिकै हो। हैन भने कुन जनताले संसद विघटनको कुरा उठाए र अराजक गतिविधि लाई आश्रय दिएका थिए ? कुनै-कुनै गोबर गणेश चाहिँ सभामा त्यत्रो उपस्थिति भन्छ। रवि लामिछाने ज्ञानेन्द्र शाही र पुर्व राजाले पनि उत्तिकै मान्छे जम्मा पारिरहेका छन् नगद बिनै। गोबर भरिएको दिमाग लाई यो थाहा नहुन सक्छ। “हामी यहाँ छौँ” भन्दै एउटै पार्टी भित्रका स्वयम् माहान कहलिएकाहरु कोहि सत्तामा त कोहि सडकमा उत्रिएको नदेख्ने अनुत्पादक नेता हरुका रैती र दास हरुले मान्छे भएर जिएको देख्दा पनि अचम्म लागेर आउँछ।
तत्कालिन समयमा मनमोहन अधिकारीको मध्यावधीमा जाने निर्णय आई अदालत ले बदर गर्दा देशै भरी हुलदङ्गा तोडफोड र अराजक गतिविधि गर्दै सर्वोच्च अदालत को अपमान गर्ने (दुई चार दिन अघाडी सर्वोच्च को न्यायाधीश लाई सडकमा घिसार्छौं भन्ने हरुले आज नैतिकवान देखिरहेको) जमात ज्युँदै छ। आफू अनुकुल निर्णय हुँदा सम्मान र प्रतिकुल निर्णय हुँदा अपमान गर्ने चेतना स्तर खस्किएका लम्पट हरुलाई देख्दा हिटलर ले प्वाँख उखेलेर चारो हाल्दै कुखुरा लाई पछि-पछि कुदाएको याद आउँछ। यी झोले, कार्यकर्ता र हनुमान हरुको औकात पनि यहाँ भन्दा माथि हुँदै होइन्। शुद्ध सङ्ग आफ्नो नाम लेख्न नजान्ने झोले कानून को ब्याख्याकार हुञ्छ हाम्रो नेपाल मा। आफ्नै देश को इतिहास नपढेको झोले विश्व इतिहास को गफ सुनाउँछ हाम्रो नेपाल मा। गणतन्त्र आएको १४बर्षमा यी ल्वाँठ हरुले विकृती को विरुद्ध बहस चलाएको एउटै सुनिएन अब को २बर्षमा के चाहिँ छलाङ्ग मार्ने हुन् हाम्रो नेपाल मा।
संसद पुनर्स्थापना भयो, अब के हुन्छ ? पात्र तिनै हुन्। प्रवृती त्यहीँ हो। ब्यबस्था यहीँ हो। भैरहेको नालायक सरकार परिवर्तन भैहाल्यो भने कुन चाहिँ दूध ले नुहाएको ब्याक्ती प्रधानमन्त्री बन्न आउने हो र हर्षोल्लासका साथ दियो बालेर शान्त रात लाई सिंगारौं ? के को खुशियाली मा दिप प्रज्वलन भन्दै ममवत्ती को सत्यानाश पारौं ? जस्को नाममा अनेकौं शृङ्खलाबद्ध घटनाहरु को लावालस्कर छ त्यहीं ब्याक्ती प्रधानमन्त्री हुन आउछ भने त्यो कुन नियम कानून अन्तर्गत आएको हुञ्छ ओए झोले, कार्यकर्ता र हनुमाने हो ? तसर्थ कसैले खुशी र दुखी हुनु जरुरी छैन। समग्रमा सेरोफेरो काले काले मिलेर खाऊ भाले भने जस्तै मात्र हो। पुनः छोरी-बुहारी, भाई-भतिजा, सम्धी-ज्वाइँ र केही नातागोता-झोलेझ्याम्टे (औकात भएका) नियुक्ति र सदर हुञ्छ जून पहिल्यैं देखि हुँदै आईरहेको छ। बिकास शान्ती र सम्वृद्दी नेताहरु को धोती को फेरो मा मात्र सिमित छ। तसर्थ यो नतिजा धुर्त नेताहरु को जित र हार सङ्ग सम्बधित छ। बाँकी जम्मै युज एण्ड थ्रो ट्वाईलेट पेपरमा परिणत हुने हो। लेखेर राखे हुन्छ ।
बेला-बेला माहान ब्याक्तीहरुले भन्दै आउनु भएको छ। जून देश का नेताहरु को आफ्नो छुट्टै ब्यापार ब्यबसाय उद्योगधन्दा समग्रमा भन्दा पेशा हुँदैन त्यो देश को राजनीतिक शुद्ध हुँदैन। तर, हाम्रो देशमा राजनीतिक जस्तो सेवा लाई पेशा बनाउने हरु लाई नै माहान र भाग्य विद्याता ठान्ने झोले कार्यकर्ता हरु कहिल्यैं मान्छे बन्न नसक्ने पशु हुन्, यो नै यिनिहरु को अत्ति उत्तम दर्जा हो र अर्को कुरा पनि भनिएको छ- दलाल पुँजिपती नोकरशाही तानाशाही ब्यबस्था फालेर जनता को शासन आए पनि प्रवृती उहीँ रह्यो भने जनता को शासन ल्याउनु र नल्याउनुमा कुनै फरक पर्दैन। यस्ले जनता को जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन ल्याउनेवाला छैन। यस्ता कुरा झोले कार्यकर्ता हरुले कहिल्यैं बुझ्नेवाला छैनन् किनकी यिनिहरु लाई यो सिकाईएकै हुँदैन।
आदरणीय झोले, कार्यकर्ता र हनुमानहरु हो ! अहिलेको ब्यबस्था र बर्तमान परिस्थिती ले जनता नचाउने देखि बाहेक केही गरेको हो भन्ने ठाञ्छौं भने तु स्कुल जाउँ र सुरु गर, जहाँ गुरुहरु ले उचित शिक्षादिक्षा दिनुहुनेछ। हैन भने तिम्रा उर्जाशिल उमेर लाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर। भ्रष्टाचार को विरुद्धमा तिम्रा आवाज हरु उठाउने सामर्थ्य राख। हत्याहिंसा बलात्कार को बिरुद्ध मा बोल्ने साहास जुटाउ। धर्म संस्कार सस्कृती को जगेर्ना गर्न तनमन लगाएर एकजुट बन। कर्तब्यबोध र जिम्मेवारी नागरिक भएको आभाष दिलाउ। भिडमा सिठ्ठि र ताली बजाएर आफै हराएको मानव बन्दै औंशी र पुर्णेमा झुल्किने मानव नबन। सबैभन्दा ठूलो कुरा विकृती को बिरुद्ध मा खुलम खुल्ला च्यालेञ्ज गर्दै बहस र छलफल चलाउने जमर्को गर। नेताहरु जानाजाना गल्ती गर्ने। अदालत ले सच्याई दिने। खुशियाली र दिपावली चाहिँ तिमी ले मनाईदिनु पर्ने ? थुईक्क, यस्तो पनि जिन्दगी ! निन्द्रा बाट ब्युझ अझै पनि सुध्रने मौका छ। गल्ती को आत्मा समीक्षा गर अनि मात्र तिम्रो गुणगान गाईने छ। ब्याक्तिगत रुपमा तिम्रो नाम को जय होस् भनेर लेखिने छ।
Posted in राजनिती, विचार, समाज, सम्पादकीय
Tagged पामेल उपाध्याय, सर्वोच्चको फैसला